Mayelana ne-Aasraw
I-AASraw esanda kusungulwa ithole imali ebalulekile yokuqalisa, ngakho-ke yaheha amakhemikhali amaningi asezingeni eliphezulu, iningi lawo eligxila kakhulu embonini yamakhemikhali. Ngokuzuza okuphumelelayo koxhaso lokuqala, sitshale imali ekusebenziseni ikhwalithi ephezulu okunikezelwe ekuhlanganisweni, ekuhlanzweni nasekuhlaziyweni komugqa wethu womkhiqizo. Siyilabhoratri ephelele yokuhlanganisa, hhayi umthengisi nje kuphela wemikhiqizo yenye inkampani. Sinohlu oluphelele lwezinto zokusebenza, kufaka phakathi - umehluko wokuskena amakhalori, ukusebenza kwe-liquid ephezulu yokusebenza, i-infrared spectroscopy, i-spectroscopy ebonakalayo ye-ultraviolet njll. Njengamanje sisebenzisa onjiniyela bezobuchwepheshe abangaphezulu kwamashumi amabili. Izimpahla zethu ezihleliwe zingaphezu kwezigidi ezingamashumi amathathu zamaRandi (US).
Ukulandela isiqubulo esithi "Ukuhlakanipha, Ukholo, Insizakalo," i-AASraw inikezela ngezimpahla ezinekhwalithi ehlukile, izindleko eziphansi, nokusebenza okugcwele ukusiza kangcono izimpilo emhlabeni wonke. Yonke imikhiqizo evela ku-AASraw inikezwa ngobumsulwa obungaphansi kwama-98%, futhi yonke ilawulwa ngokuqinile ngaphansi kwe-ISO9001, UPS 36, BP2016, EP6, GMP noma ezinye izitifiketi njengoba kudingeka ukuhlangabezana namazinga adingekayo wamazwe angenisayo.